Khange kubekho ncoko noTesla kwaye kubonakala ngathi ngekhe kubekhona | Ndisuka mac
Khange kubekho ncoko noTesla kwaye kujongeka ngathi ngekhe kubekhona.
Buyela kwakhona nge-Apple Car iincoko neenkampani ezahlukeneyo kwicandelo leemoto Ukuza kuthi ga ngoku akukho nto iye yenziwa ngayo nayiphi na kuzo, onke amehlo ajongiwe kweyona nkampani inamandla kwicandelo lemarike yeemoto zombane. I-Tesla ihlala iphambili kweli candelo kodwa kubonakala ngathi I-Apple ayizimisele ukudibana nabo banoxanduva.
Xa onke amarhe malunga neencoko ezinokubakho ezenziwa ngu-Apple kunye neenkampani ezahlukeneyo kwicandelo lemoto yombane, uninzi lwethu luyazibuza ukuba kwenzeka ntoni ngoTesla. Ngeli xesha umntu ophambili ophetheyo, u-Elon Musk wathumela loo nto kuTwitter Uzamile ukuthengisa iTesla kuApple kwiminyaka emininzi eyadlulayo kwaye uCook wayengafuni nokudibana naye.
Lo mxholo udlulileyo uphinde wavela kwi Udliwanondlebe olwenziwe yintatheli ye-NY Times uKara Swisher nge-CEO ye-Apple, UTim Cook. Kuqala kwabonakala ngathi ufuna ukuyiphepha impendulo kodwa ngokunyanzelwa yintatheli, uCook omdala olungileyo uvumile:
Khange ndithethe no Elon nangona ndiyithanda kakhulu kwaye ndiyayihlonipha inkampani ayakhileyo. Ndicinga ukuba uTesla wenze umsebenzi omangalisayo wokungamiseli ubunkokeli, kodwa nokugcina ubunkokheli ixesha elide kangako kwisithuba se-EV. Ke ndibaxabisa ngokwenene.
Amagama ambalwa angaphikisani noko kubhalwe ngu-Elon Musk kwinethiwekhi ye-Twitter, nangona kunjalo bonisa umdla omncinci yiApple ngokubhekisele kwishishini likaTesla uqobo. Andiqondi ukuba injongo yenkampani yeapile kukuthenga iTesla. Endaweni yoko akufunayo kukuba ekugqibeleni ukumiliselwa kwesithuthi sombane kungcono kunezo zikaTesla. Amarhe athi ngowama-2025 siza kubona iApple Car, ngumcimbi wexesha kuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Khange kubekho ncoko noTesla kwaye kujongeka ngathi ngekhe kubekhona.